We Fight We Win. -- " More than Media ": စောလှယ်ဘွယ် ကို ဘာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာလဲ
စောလှယ်ဘွယ် ကို ဘာကြောင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာလဲ
အမေး - ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင် စောလှဘွယ်ကို ဘာလို့ ထိုင်းက ဖမ်းချင်တာလဲ။
အဖြေ - ဒီကေ ဘီ အေ ထိမ်းချုပ်ဒေသ မှာ အင်တီမိုနီ ကို ထိုင်းကလိုချင်တယ်။ တရုပ်ပြည်မှာ အင်တီမိုနီကို သေမတတ် လိုခြင်နေတယ်။ ဒီဒေသမှာ ရွှေလဲ ထွက်တယ်။ ရွှေကို အောင်သောင်းက လုိုချင်တယ်။
အင်တီမိုနီနဲ့ရွှေကို ထုတ်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်တွေအကြီးအကျယ် ပျက်ကုန်မယ်။
အမေး - စောလှဘွယ်က မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်တယ် လို့ ပြောတယ်။
ဖြေ - မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူတွေကို ဖမ်းခြင်ရင် ဘာဖြစ်လုို့ခွန်ဆာကို မဖမ်းခဲ့သလဲ။
လောစစ်ဟန် နဲ့ သူ့ သား ထွန်းမြင့်နိင်ကို ဘာကြောင့် မဖမ်းသလဲ ။
အမေး- ဒါကို ဘယ်လို့ ထင်သလဲ ။
အဖြေ - ဒါက ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြစ်တယ်။
မြန်မာ- ထိုင်း ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြစ်တယ်။
အမေး- ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲ
အဖြေ- စောလှဘွယ်ကို အားပေးရမယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူတွေကို ဖမ်းခြင်ရင် ဘာဖြစ်လုို့ခွန်ဆာကို မဖမ်းခဲ့သလဲ။
I agree this.Why Thai didnt arrest Kun Sa?
10 May 2012 at 17:51